Anna Schetnikova : Filoha mihira sy fomba fisainana · Global Voices teny Malagasy
Anna Schetnikova : Filoha mihira sy fomba fisainana
Voadika ny 15 Jolay 2019 7:02 GMT
Tahaka ny maro amin'ireo mpikambana hafa ato amin'ny GV, hitako tamin'ny Google ny Global Voices, ary tiako ny Google noho izany. Te hanatsara ny fahaizako Anglisy sy ny fandikanteniko aho, satria tsy manana traikefa misongadina, ny milatsaka an-tsitrapo no hany fomba natao. Koa vao avy niditra tao amin'ny “переводы волонтёрство” (fandikan-teny an-tsitrapo) aho ary nisy ny GV Rosiana! Tiako ny hevitr'ilay tranonkala, noho izany dia nofenoiko ny taratasy fangatahana ho mpandika teny.
Taorian'izany dia adinoko ny momba ilay tranonkala, saingy andro vitsy avy eo, dia nahazo mailaka avy amin'i Katya Golubina, tonian-dahatsoratry ny Lingua Rosiana aho. Nolazainy tamiko fa afaka manomboka mandika teny aho, ka nanomboka tokoa aho. Ny fandikan-teniko voalohany dia mikasika ireo filoha mihira any Azia Afovoany. Ary mbola tsaroako izany, satria nanome ahy fahalianana hanohy ny asa amin'ny GV, tahaka ny nahatsapa zavatra toy ny aingam-panahy nomena ahy tamin'io lahatsoratra io aho.
Tamin'ny voalohany, ny GV no ihany fomba hanatsarako ny fahaizako mandika teny, saingy taorian'ny fandikan-teny sasany dia lasa zavatra lehibe kokoa izany, ary dia nanjary zava-dehibe ho ahy hatrany. Tsy vitany hoe nianatra zavatra maro mahaliana fotsiny aho, fa nanomboka nieritreritra momba izao tontolo izao ihany koa. Nahaliana ahy foana ny tantara sy ny kolontsain'ny firenena hafa, saingy ankehitriny dia nanomboka nieritreritra momba izao tontolo izao ho toy ny olona marobe ahitana fitoviana betsaka, saingy koa tena samy hafa, ary mahatsapa ny firaisana amin-dry zareo izay mbola tsy hitako akory aho, ary mandray ny sasany amin'ny olan'izy ireo ho tahaka ny olako. Indrisy fa tsy afaka manazava izany fahatsapana izany feno kokoa aho.
Tamin'ny mailaka voalohany noraisiko avy amin'i Katya, nanoratra izy hoe: “Manantena aho fa ao amin'ny tetikasa, tsy ny hirika ahafahana mampihatra ny fiteny ihany no hitanao, fa eo koa ireo lohahevitra marobe mahaliana sy fihaonana miaraka amin'ny olona.” Ary tena marina tokoa izany! Na dia tsy mbola nifankahita mivantana tamina GV'er aza aho, dia efa mahafinaritra ny “fivoriana” amin'ny alalan'ny mailaka. Mazava ho azy fa mahafinaritra ilay mpikambana GV voalohany “nihaona” tamiko, Katya, nanampy betsaka ahy hitia ny GV ny faharetany sy ny fitiava-namany. Ary ny hafa rehetra tsy fantatro ankoatra ny anarana, fianakaviako lehibe ianareo, ary sambatra aho isaky ny mieritreritra GV.
Izany no fomba nanovan'ny fihiran'ny filoham-pirenena ny fiainako sy ny fomba fisainako. Misaotra, Global Voices!
22 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana